China Dual chinangwa wrench, ratchet huviri-chinangwa wrench, chinosimudzwa musoro ratchet wrench, kaviri yakavhurika chipanera, bhokisi wrench, inogadziriswa wrench fekitori uye vagadziri | Boda
Dual chinangwa wrench, ratchet dual-chinangwa wrench, inofambiswa musoro ratchet wrench, kaviri yakavhurika wrench, bhokisi wrench, inogadziriswa wrench.
Kupatsanura uye kushandiswa kwespanner:
Spanners yakakamurwa kuita mhando mbiri, yakafa chipanera uye chipanera chehupenyu. Iyo yekutanga inoreva chipanera chine nhamba yakatarwa yakanyorwa pairi, nepo yekupedzisira iri wrench inogadziriswa.
1. Solid spanner: one end kana both end inogadzirwa nekuvhurwa kweiyo yakagadziriswa saizi, iyo inoshandiswa kumisikidza nzungu kana mabhaudhi eimwe saizi.
2. Bhokisi spanner: mativi ese maviri ane hexagonal gomba kana gumi nembiri kona gomba rinoshanda magumo, rakanakira rakamanikana nzvimbo yekushanda, haigone kushandisa yakajairika wrench chiitiko.
3. Dhivhosi yechinangwa chechipiri: kumucheto kumwechete kwakaenzana neyakaganhurana spanner, mumwe mugumo wakaenzana neyakarembera spanner, uye mabhaudhi kana nzungu dzerondedzero imwechete dzakapetwa pamagumo ese.
4. Adjustable spanner: iyo yekuvhura upamhi inogona kugadziridzwa mukati meimwe saizi renji, uye inogona kushandiswa kutenderedza mabhaudhi kana nzungu dzakasiyana dzakasiyana. Zvimiro zvewrench ndeyokuti shaya yakamisikidzwa inoitwa shaya yakati sandara nemazino akanaka; kumugumo kweshaya inotakurika kunoitwa shaya yakati sandara; mumwe mugumo unogadzirwa kuita rushaya rwe concave nemeno akanaka; nekutsikirira pasi honye, ​​shaya inofambiswa inogona kukurumidza kubviswa uye chinzvimbo cheshaya chinogona kuchinjwa.
5. Hook spanner: inozivikanwawo secrescent wrench, yaishandurwa kukora kweyakaganhurwa nati nati.
6.Socket wrench: inoumbwa nezvakawanda zvigadziko zvine hexagonal hole kana gumi nembiri gomba, uye yakagadzirirwa mubato, yekuwedzera tsvimbo uye zvimwe zvekushandisa. Iyo inonyanya kukodzera mabhaudhi kana nzungu ine yakamanikana kwazvo sikuruu chinzvimbo kana kudzika kushushikana.
7. Hexagon wrench: L-yakaita hexagon bar wrench, inonyanya kushandiswa kutenderedza screws yehexagon. Iyo modhi yeiyo hexagon wrench inoenderana nehukuru hwerutivi rwakatarisana rwehexagon, uye saizi ye bolt ine muyero wenyika. Chinangwa: inonyanya kushandiswa kumisikidza kana kubvarura nzungu dzakatenderedza pamaturi emuchina, mota uye michina michina.
8. Torque wrench: inogona kuratidza iyo yakashandiswa torque painokanganisa bhaudhi kana nzungu; kana kana torque yakashandiswa ikasvika pane yakatarwa kukosha, inotumira mwenje kana chiratidzo cheruzha. Iyo torque wrench inoshandiswa kugungano ine yakatarwa torque.
Kushanda kwekusanganisa wrench: hombe maindasitiri-echinangwa wrench inokodzera peturu, makemikari, simbi, kugadzira simba, kunatsa mafuta, kuvaka ngarava, petrochemical nemamwe maindasitiri. Icho chishandiso chakakosha pakuisa michina, mudziyo uye kugadzirisa michina. Dual chinangwa wrench yakakamurwa kuita metric system uye Chirungu system. Zvishongedzo zvewaviri-chinangwa wrench / musanganiswa wrench: iyo mbiri-chinangwa wrench inogadzirwa ne45 yepakati kabhoni simbi kana 40Cr alloy simbi. Kugadzira chiyero chechipiri chinangwa wrench: GB / t4392-1995 (percussion solid wrench uye percussion box wrench). Zvimiro zvewirip--chinangwa wrench: iyo mbiri-chinangwa wrench / musanganiswa wrench inogadzirwa kubva yepamusoro-mhando yepakati kabhoni simbi kana yepamusoro-mhando chiwanikwa simbi. Iyo ine hunhu hweyakagadziriswa dhizaini, yakagadzikana dhizaini, yakakwira zvinhu kuwanda, yakasimba kukanganisa kusagadzikana, hapana kupeta, kuenderera, hapana kukotama, kukwirira kwehukuru uye kusimba. Izvo zvinhu zveAdjustable spanner inofanira kunge iri:
1. Chromium vanadium simbi: kemikari chiratidzo CR-V, iri yemhando yepamusoro musimbi.
2. Carbon simbi: hunhu hwakazara, uye kune akawanda mumusika.
Wrench mhando inowanzo shandiswa yekuisa nekubvisa maturusi muhupenyu, ayo anoshandiswa kushandura mabhaudhi kana nzungu.
Kune maviri marudzi emapanera, akagadziriswa wrench uye inoshanduka wrench. Iyo yekutanga inoreva chipanera icho chakanyorwa nenhamba yakatarwa, inozivikanwa zvakare sewrench yakasimba, uye yekupedzisira ndiyo wrench inogadziriswa.
Hupamhi hwekuvhura hwechinongedzo chinofambiswa chinogona kuchinjika mukati meimwe nhanho. Icho chishandiso chekusimudza uye kusunungura nzungu uye mabhaudhi ezvakasiyana marondedzero. Wrench inogadziriswa inoumbwa nemusoro uye mubato, uye musoro wacho unogadzirwa nemuromo weplate unosimudzwa, muromo wakaomarara, muromo weplate, turbine uye shaft pini.
Dead spanner inozivikanwa zvakare seyakaomeswa wrench, inonyanyo kuve yakakamurwa kuita yakapetwa kaviri yakasimba wrench uye imwechete musoro solid wrench. Iyo ine akasiyana akasiyana mashandiro, kunyanya mukugadzira michina, zvishandiso, kushongedza imba, kugadzirisa mota uye zvimwe zvikamu. Yakapetwa misoro yakasimba wrench chishandiso chakajairika, icho chakakosha pakuunganidza maturusi emuchina kana zvikamu zvekusiya, kutakura uye yekurima michina yekugadzirisa.
Pashure: Kuveza huni blade, aluminium saw blade, carbide saw blade, kucheka maturusi
Zvadaro: Hexagon wrench, flat musoro hexagon wrench, bhokisi hexagon wrench, bhora mhando hexagon wrench
Hexagon wrench, flat musoro hexagon wrench, bhokisi h ...
Chigero, chigero chePVC, PVC cutter, pombi yemvura ...
Simbi faira maturusi, simbi faira, yakaoma simbi fi ...
Chinotsvedza, putty banga, yemapuranga mubato, mapurasitiki ha ...
Chikamu, magnetic level, aluminium level, alloy lev ...